Duofold® kolimo Packaging
Duofold ® kolimo Packaging
Duofold idibanisa iimpawu kakhulu ecacileyo, iplastiki ibhokisi-grade kunye paperboard ukuvelisa iphakheji olubonakalayo hlukile ngokwenene. Ukudibanisa ezi substrates ezimbini ayaba kuvumela kuyilo ezithile ezizodwa kakhulu zesakhiwo, lo gama ngokubonelela okuvelayo ezimbili ezibonwayo, textural, nezihlwabisayo.
Soft ndezela ® amanqaku ngqongqo umboniso zingasetyenziswa ukwenza panels ezininzi ibhokisi zeplastiki okanye wenze iifestile ukuba azisongele imigca amanqaku ngeenxa ezininzi, evumela ukubonakala kude kakhulu ukuba eqhelekileyo iibhokisi windowed paperboard. Yiyiphi eyona, avezwa umboniso wongeza ingqibelelo kunye namandla, nokuvumela iifestile elikhulu kunokuba kunokwenzeka usebenzisa window film ezilula.
Kwaye ngenxa yefuthe okukhulu kwithala, nayiphi indibanisela offset, flexo kunye / okanye ushicilelo silkscreen, kunye ngefoyile ye sokunyathela kunye nezinye iimpembelelo ezizodwa ubuciko, linokusetyenziswa nokuba zeplastiki okanye panels paperboard, okanye zombini.
Bukela Duofold Video